ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၏စဉ်းစား? ဤတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (၉) ခုရှိသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2019
သာ အမေရိကန်လူမျိုး 55% စတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သတင်းပို့ပါ။ အကြောင်းမှာစတော့ဈေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်၏ကြွယ်ဝမှုကိုကြီးထွားစေရန်အထင်ရှားဆုံးသောနည်းလမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကပြောခဲ့သည်, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူလွှမ်းမိုးသောခံစားရနိုင်ပါတယ်! လူအများစုသည်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိကြ။ သူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်သောငွေများကိုဆုံးရှုံးရန်သတိထားကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်လုံးဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ သင်၏နည်းဗျူဟာကိုရိုးရှင်းအောင်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်။ သင်စတင်ရန်သင်သိရန်လိုအပ်သည့်ထိပ်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဥာဏ်များကိုလေ့လာကြပါစို့။
4. Right ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ခြေချောင်းများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောကသို့မ ၀ င်မီ၊ သင်သည်အရေးပေါ်အခြေအနေ၌မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နေကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးပေါ်အခြေအနေရောက်ရင်ငွေဟာဘုရင်ဖြစ်လို့ပဲ။
ငွေရေးကြေးရေးကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွင် ၃ လမှ ၆ လအထိငွေစုဆောင်းရန်အကြံပြုပါသည်။ သင့်မှာမှီခိုနေတယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းဂဏန်းကိုတစ်နှစ်အထိတိုးချင်လိမ့်မယ်။
ဒီငွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားဖို့သတိရပါ သာ အရေးပေါ်အခြေအနေ (ဥပမာ - ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်၊ အလုပ်ပြုတ်ပြီးနောက်ငွေတောင်းခံလွှာများ) ။ သင်ကမထိဘူးဆိုရင်, ကြီးမြတ်! တစ်နေ့ကျရင်မင်းလုပ်မှာပါ။ သင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လျှင်ရန်ပုံငွေများကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဖြည့်ရန်ရည်ရွယ်ပါ။
အငြိမ်းစားယူဖို့သင်ရှာနေပါသလား။ တစ်နေ့မှာသင့်ကလေးကိုကောလိပ်တက်ချင်ပါသလား။ သင်၏ပန်းတိုင်များသည်သင်၏အငြိမ်းစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။
ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကသင့်အားပိုမိုအန္တရာယ်များစေနိုင်သည်။ ဤအတွေးအခေါ်သည်စတော့စျေးကွက်သည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်ခါနေပြီးစီးဆင်းနေလျှင်ပင်အမြဲတမ်းတက်သွားသည်ဟူသောသမိုင်းအရိပ်အယောင်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ သင့်တွင်ရေတိုပန်းတိုင်များရှိပါကထိုရန်ပုံငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ပို၍ ရှေးရိုးစွဲချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ပျမ်းမျှအလုပ်ရှင် 401k ပွဲ လက်ရှိ 4.7% ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်၏အလုပ်ရှင်ကပွဲတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းပါကအနည်းဆုံးဤပွဲစဉ်အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်တတ်နိုင်သမျှလုပ်သင့်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့အခမဲ့ပိုက်ဆံပါ
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ 401 (k) သို့ထပ်မံထည့်သွင်းရန်တတ်နိုင်ပါကထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ ထိုငွေသည်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တိုးပွားလာသည်။
ပွဲစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောပွဲစားများသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အကြံဥာဏ်များပေးပြီးသင့်အတွက်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ လျှော့စျေးပွဲစားများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, DIY ချဉ်းကပ်မှုပိုမိုလိုက်နာလေ့ရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်သည့်အခါ (အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေအပါအဝင်) ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခကြေးငွေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင်ကုမ္ပဏီ၏အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ရန်လိုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှစတင်ပါကစရိတ်နည်းသည့်ရန်ပုံငွေများကိုသာအာရုံစိုက်ရန်ရည်ရွယ်သင့်သည်။ ၀.၅ သည် ၀.၁ နှင့်သိပ်ကွာခြားပုံမရသော်လည်းကှဲလှဲမှုသညျသငျသညျရေရှည်ဖွစျသှားသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်စတော့ရှယ်ယာရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်အတူအခကြေးငွေနှိုင်းယှဉ်ချင်တယ်။ အတိတ်ကာလသည်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက်အရူးအမူးစွဲလမ်းစေသောညွှန်ပြချက်မဟုတ်သော်လည်းများစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သမိုင်းကြောင်းအရကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုရွေးချယ်ရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရေရှည်တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါကစွန့်စားရမှုအချို့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ တကယ်လို့သင်ဟာစျေးကျဆင်းသွားတာနဲ့စျေးကနေဆွဲထုတ်မယ့်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်သင့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ စျေးကွက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွင်သင်၏ငွေများကျဆင်းလာသည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ကြောက်စရာပင်။ ၎င်းကို“ ထိုင်” ရုံဖြင့်မယုံနိုင်အောင်စိန်ခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သုတေသနပြုချက်အရအတက်အကျပြောင်းလဲနေသောကာလအတွင်းငွေကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများသည်မကျင့်သုံးသူများထက်သာလွန်သည်။
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေချထားခြင်းသည်သင်၏ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အထင်ရှားဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူအများစုကသင်၏ငွေကြေးကြက်ဥအားလုံးကိုတောင်းထဲ၌မထားရန်အကြံပေးသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်စတော့တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုသာရွေးရန်ကောင်းသည်။
အဲဒီအစား, သငျသညျအမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောနှောချင်တယ်။ စျေးကွက်မလွှဲမရှောင်ကျဆင်းသွားသောအခါဤနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ငွေကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ အချို့သောလူကြိုက်များပြီးအခြားရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် -
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်“ ငယ်လွန်း” သည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ အစောပိုင်းကသင်စတင်သည်၊ သင်၏ငွေသည်များများလုပ်ဆောင်လေလေဖြစ်သည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ပေါင်းစပ်အကျိုးစီးပွားလှပသောဖြစ်ပါတယ် အရာ။
လူငယ်ဘဝမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုအများကြီးထည့်ဝင်စရာမလိုပါဘူး၊ နောက်ပိုင်းမှာဘ ၀ မှာစတင်တဲ့သူတွေလိုပဲ။ နံပါတ်များဂိမ်းတွင်မပါ ၀ င်ပါနှင့်။ တစ်လကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်အကုန်အကျခံနိုင်ရင်တောင်မှအထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်။
အချို့လူများကသူတို့၏ငွေများကို“ set-it-and-poh-it” စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ သူတို့ဟာငွေကိုမထိကြဘူး၊
သို့သော်များသောအားဖြင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ဒီနေ့အလုပ်လုပ်တာဟာတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လောက်လောက်တော့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များတိုးတက်ပြောင်းလဲပုံပေါ် မူတည်၍ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်ခွဲဝေရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသောအခါသင်၏ဘဏ္successာရေးအောင်မြင်မှုအတွက်သင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဘယ်သူကမှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဤရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များသည်သင့်အားရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေသင့်သည်။ မတူညီသောပွဲစားများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းနှင့်အဘယ်သို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုပိုမိုလေ့လာရန်။